प्रधानमन्त्री आज डिस्चार्ज हुने : RajdhaniDaily.com
Home Breaking News प्रधानमन्त्री आज डिस्चार्ज हुने
भाइटल तथा ल्याब सूचक राम्रो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुँदै गएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुँदै गएको प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य परीक्षणका नतिजा सामान्य र सुधारोन्मुख रहेको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा. प्रेम कृष्ण खड्गाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको भाइटल तथा ल्याब सूचक राम्रो अवस्थामा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले खानासमेत खान थालिसकेका छन् । उनले आईसीयूमै नियमित व्यायाम गर्दै आएका छन् । यही अवस्था रहिरहे र स्वास्थ्यमा कुनै उतारचढाव नआए प्रधानमन्त्री ओलीलाई शुक्रबार साँझसम्म डिस्चार्च गर्न सकिने अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
पत्नी राधिका शाक्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बिहीबार भेटेकी छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले शाक्यले भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएको बताएका छन् । प्रमुख सल्लाहकार रिमालले ट्वीटरमार्फत प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा निरन्तर प्रगति भइरहेको र दोस्रो भिजिटरका रूपमा प्रथम महिला राधिका शाक्यले भेटेको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि पहिलो भिजिटरका रूपमा मिर्गौला दाता समीक्षा संग्रौलाले बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको २१ फागुनमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीले दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिकित्सकसहितको निगरानीमा बस्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आवश्यक व्यवस्थापन गरिँदै छ ।
लन्डन । युरोकप फुटबलमा इंग्ल्याण्ड, नेदरल्याण्ड्स र अष्ट्रियाले विजयी सुरुवात गरेका छन् । शनिबार भएको समुह डि को खेलमा इंग्ल्याण्डले क्रोएसियालाई १–० ले हराएको...
चुरे मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि बिनियोजित बजेट मंगलबार प्रदेश सभा समक्ष पेश गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक...
सगरमाथाको उचाइ बढ्यो, नयाँ उचाई ८८४८.८६ मिटर
काठमाडौं । सरकारले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ उचाइ ८८४८.८६ मिटर पुगेको छ । नेपाल र चीन सरकारले...
Exclusive Roshan Shrestha - March 26, 2020 0
काठमाडौं । गैरआवासीय संघ कोरियाको पहलमा कोरोना परीक्षणका लागि अत्यावश्यक मानिएको प्रविधि रियल टाइम पि.सि.आरमा प्रयोग हुने किट नेपाल ल्याउने तयारी थालिएको छ ।...
पाल्पामा थप २ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पाल्पा । आइतबार पहिलो पटक तीन जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाल्पामा सोमबार २ जना थपिएका छन् । उनीहरु निस्दी गाउँपालिकाका हुन् । प्रदेश...
रोल्पा नेर्पा निवासी सन्देश थापाको दुर्घटनामा निधन
प्रदेश ५ Kumar Raut - June 17, 2020 0
रोल्पा । त्रिवेणी ५ नेर्पा निवासी २६ वर्षीया सन्देश थापाको मङगलबार राती सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गएको छ । साँझ साढे ८ बजेतिर आफैले...
काठमाडौं । विश्वभर महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ संक्रमणका कारण शनिबार साँझसम्म मृत्यु हुने गैरआवासीय नेपालीको संख्या ७३ पुगेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए),...
Breaking News Roshan Shrestha - August 2, 2020 0
खेल एजेन्सी - June 15, 2021 0
सुस्त गतिमा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्ययोजना
Exclusive Kumar Raut - February 27, 2020 0
काठमाडौं । जिम्मेवार निकायको बेवास्ताका कारण सरकारले अघि सारेको उपत्यका ट्राफिक व्यवस्थापन अल्पकालीन कार्ययोजना सुस्त देखिएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायत जिम्मेवार निकायका पदाधिकारीको...
बिचार Kumar Raut - January 14, 2021 0